SLC २०७१ को Result सार्वजनिक ४७.४३ % उत्तीर्ण - Gopal Bhandari
June 19, 2015 by Gopal Bhandari · Leaveacomment
काठमाडौं , असार ४
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी नतिजा प्रकाशन गरेको हो । यस वर्ष परीक्षामा ४७.४३ % विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४३.९२ % प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।
यस वर्षको नियमित परीक्षामा ५,७४,६८५, पुनः परीक्षामा १,४५,१८३ तथा प्राविधिकतर्फ ३२८८ सहभागी थिए । परीक्षा गत वर्ष चैत ५ देखि १३ चैतसम्म सञ्चालन भएको थियो ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार इन्टरनेटको पहुँच नभएकाले एसएमएस गरेर पनि परीक्षाफल थाहा पाउन सक्नेछन् । त्यसको लागि SLC लेखेर एक स्पेस दिएपछि सिम्वल नम्बर लेखेर ५५६६, १६००, ५००१, ४९४९, ५२२५, ७६७६ मा एसएमएस गर्न सकिन्छ । यस्तै १६०० मा फोन गरेर पनि नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयको वेवसाइट www.moe.gov.np मा परीक्षाफल हेर्न सकिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले जनाएको छ ।
एसएलसी २०७१ को संक्षिप्त नतिजा विवरण
शिक्षा विभागको वेवसाइट www.doe.gov.np र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको वेवसाइट www.soce.gov.np मा परीक्षाफल हेर्न सकिनेछ । योसँगै www.slc.ntc.net.np, www.ncell.com.np मा परीक्षाफल हेर्न सकिनेछ । यसवर्षदेखि सुरु भएको प्राविधिकतर्फको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा भने एक साता ढिलो हुने र श्रेणीकरण पद्धतिबाट हुने नियन्त्रक द्वारेले बताए ।
SLC २०७१ Result को प्र का शित भएको छ । तपाईको वा आफन्तको सहि Symbol Number दिनुहोस वा यो तलको लिंकमा गएर आफै हेर्नुहोस !
Mark Sheet सहितको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला
यस वर्ष एसएलसी दिएर उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई हादिॅक बधाई तथा उतर उतर प्रगतिको धेरै धेरै शुभकामना ! साथै नाम ननिस्किएका भाइ बहिनीहरु निराश नहुनुहोला । तपाइको भविष्य एसएलसी को नतिजाले मात्र निर्धारण गर्ने होइन अब राम्रो गर्छु भनेर अघि बढ्नुभयो भने सफलता अवस्य हात लाग्नेछ ।
साईन्स इन्फोटेक पत्रीका
बौद्धिक स्रोत परिचालन केन्द् नेपाल
Posted in General. Tagged with Govermnent of Nepal, Ministery of Education Nepal, Nepali Education, SLC, SLC Result.
← सत्ता समिकरण परिवर्तनको सकेत : दाहाल राष्ट्रपति, अाेली प्रधानमन्त्री
Nepal in 2022 – The Great Vision →